ပေါက်ကရပေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပေါက်ကရပေ
Posted by မောင် ပေ on May 11, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
ဒီတစ်ခါ တို့ တွေ့ တဲ့အခါ ၊ ခေါင်းစဉ်က ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိလို့ ပါ ပေါက်ဖော်ရေ
မင်းနဲ့ ငါနဲ့ က အချင်းချင်းမို့နှုတ်ဆက်စကား မဆိုလဲ ရပေမယ့်….
ငါတို့ ပြောတာတွေကို ဖတ်မယ့် စာဖတ်သူတွေကိုတော့
““ မင်္ဂလာပါ ”” ခင်ဗျာ
ပေါက်ဖော် နဲ့ စကားပြောတဲ့ပုံနဲ့ ရေးချင်တာရေးတင်နေတာ ၊ ဒါနဲ့ ဆိုရင် ၄ပို့ စ်လောက်တော့ ရှိလောက်ပါပြီ။ အမှန်က ဒီစတိုင်က ဘယ်သူ့ စတိုင်လဲဆိုရင် ၊ မောင်ပေ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်တဲ့ ဟာသမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲမှာ စာရေးဆရာ “ကြူးနစ်” ရဲ့ စကားပြောအက်ဆေး ပုံကို အတုခိုးရေးထားတာပါ။
ဒါကတော့ ခရက်ဒစ် ခေတ်စားနေတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ ၊ လိပ်ပြာသန့် သန့် နဲ့၊ ပုံစံတူမျိုးရေးထားကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံတာပါ ။ အကြောင်းအရာကတော့ တစ်လုံးမှ မတူစေရပါဘူး ။
ဒီတစ်ခါ ပေါက်ဖော်နဲ့ ဘာ ပေါက်ကရ ၁၀၀ ပြောရမလဲ စဉ်းစားနေတုန်း…
ကျုပ် တို့ ရပ်ကွက်ထဲက လူပျိုသိုးကြီး ကိုမိုး တစ်ယောက် မူးပြီး ပုဆိုးဂွင်းသိုင်းနဲ့ သိုင်းကွက်နင်းလာတာကို မြင်လိုက်ရတယ် ။
“ ဟေ့… အချစ်တွေ စနစ်တွေ လာမပြောနဲ့၊ စနစ်မကောင်းလို့ ဆိုပြီး ဘာမှ မလုပ်ရင် ဘယ်ငါ့မယားပါသား က ထမင်းကျွေးမလဲ ၊ အချစ်မကောင်းလို့ ဆိုပြီး မိန်းမယူမှာကို ဝိုင်းတားကြတော့ ၊ အခု ဘယ်ကောင်မ ကို ငါယူရမလဲ ကွ… ဟေ… ပြောကြစမ်းပါဦး ”
ကိုမိုး ဆိုတာ ကျုပ် ဒီရပ်ကွက်ထဲ စပြောင်းလာကတဲက ရှိတဲ့ လူပျိုကြီး ၊ သာမန်အချိန်ဆိုရင်တော့ သူ့ ဖာသာ စက်ဘီးပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ရင်း အေးအေးလူလူ ၊ စက်ဘီးပြင်မည့်လူ ထိုင်မျှော်နေကြ ။ သူ့ မှာ ဆိုက်ကားတစ်စီးလဲ ရှိတယ် ။ ဆိုက်ကားကိုတော့ စက်ဘီးပြင်ဆိုင်ဘေးမှာ ထိုးထားပြီး ၊ သူ လိုက်ပို့ ချင်သော ခရီးသည်မှ လိုက်ပို့ တတ်တယ် ။
သူ မပို့ ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ၊ ခရီးသည်က ငွေ ဘယ်လောက်ပေးပေး မနင်း ။
ရပ်ကွက်ထဲက သာရေး နာရေး ရှိတဲ့အခါမျိုး ၊ ဘယ်တော့မှ လက်မနှေးပဲ ၊ လွတ်တဲ့နေရာ ၊ သူများ မလုပ်ချင်တဲ့နေရာ ဝင်ကူလေ့ ရှိတော့ ၊ သူ့ ကို တစ်ရပ်ကွက်လုံး က ခင်ကြတာပေါ့ ။
မူးပြီ ဆိုရင် သည်ရပ်ကွက်နဲ့သက်ဆိုင်သော သူ့ သမိုင်း ကို အော်ဟစ်ဆူပူစမြဲ ။
သူ မူးပြီး လျှောက်အော်ပေမယ့် ဘယ်သူမှ သူ့ ကို အပြစ်မမြင်ကြပါ ။ မမူးတဲ့အချိန်ကြ လူမှုရေး အပြည့်ရှိတာလေး နဲ့ ဖာထေးနားလည်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ ။
သူမူးတိုင်း ၊ အချစ် နဲ့ စနစ် ပဲ အော်တာ ။
ဟိုးတုန်းက အကြောင်းမသိခင်တုန်းက ၊ သူ မမူးတဲ့အချိန် ၊ သူ့ ဆိုင်လေးသွား ၊ တိုလီမုတ်စ ကူလုပ်ရင်း သူ့ အကြောင်း စပ်စုတော့……
( ဟုတ်ကဲ့ ဆက်ရေးပါမယ် ခင်ဗျာ )
ဆရာကြူးနစ်ရဲ့ဝတ္ထုမတိုမရှည်လေးတွေ ရော တိုတိုလေးတွေကိုရော
အခုလေးပေ… ရဲ့ …
ရေးဟန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ရေးပြနေလေတော့လည်း…
စပ်စုတော့ ဘာဖြစ်လဲ… မြန်မြန်ပြောနော်.. အူးပေ…
ပေါက်ကရရေးနေတာ( မောင် ပေ has written 380 post in this blog.) ရှိပြီ ခုမှပေါက်ကရ ခေါင်းစဉ်တပ်သလားဟင်….။ ဇာတ်လမ်းပြီးသွားပြီဆိုပြီး ထပြန်သွားတဲ့ ပိသတ်ကြီးကို ခုမှ တစ်ကယ် ဇာတ်လမ်းစတာပါဆိုပြီး ပြန်ထိုင်ခိုင်းသလိုတော့ဖစ်နေပြီ
ခင်လို့နောက်တာ …။ ဆက်ရေး………..။ နောက်တစ်ပိုင်းမြန်မြန်
ရေးမယ်ဆို ညန်ညန်ရေး …
ဒါ့ထက် ပေါက်ကရ ၁၀၀ ဆိုဒေါ့
ပို့စ်ပေါင်း ၁၀၀ ရေးမယ်လို့ ပေါဒါလား ..
ချင်းချင်းပေါ .. နားလည်လား …
သဂျီးပြောဒလိုပြောရရင် စနစ်ကြောင့်စနစ်ကြောင့်။ ကပေလဲ ပွိုင့်စနစ်ကြောင့် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်။ ပိုစ့်ကိုပြော ဘာဒယ်။